5 Cities Best Si Booqo Waayo Thanksgiving In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Cities Best Si Booqo Waayo Thanksgiving In Europe
(Last Updated On: 10/07/2020)
Thanksgiving ayaa had iyo jeer maalin fasax ah oo aad u dhaqanka wareegi hareeraha qoyska, turkey, iyo kubada cagta. Si kastaba ha ahaatee, kuwa idinku dhex jira raaxaysan safarka iyo isticmaali kartaa cararaan deg deg ah ka fiirsan waa faqri xilli fasaxa sannadka ee mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Booqo for Thanksgiving in Europe.
qaarada jirkaan ayaa magaalooyinkii Best in Booqo for Thanksgiving. Inkasta oo qaaradda oo dhan of Europe waa mid cajiib ah, kaliya laba doorashada ee magaalooyinka waa dhab heer sare ah si ay u ciqaabayn Thanksgiving.
Europe waa sida caadiga ah buux la dalxiisayaasha, laakiin mid ka mid ah ma isku odhan kartaa dabayaaqadii November. Taasi waa sababta qayb ka this ee sannadka waa markii ugu fiican in ay soo booqdaan magaalooyinka qadiimiga ah iyo cilinta dhaqanka Thanksgiving cunto weyn oo midabo dayrta cajiib ah.
Haddii aad tahay qof American ama Yurub, Liiska soo socda magaalooyinka waa in ay dalal top aad on iyo hareeraha Thanksgiving.
Si bilow safar of Best Cities si aan u Booqo for Thanksgiving aan gaaray – used, Belgium
Si aad u dhigay gaaban, Bruges waa magaalo dhabta sixir soo socda si toos ah qaar ka mid ekayd jir. Dabcan, magaalada jir waa meesha dhammaan been beauty. Waxaa si toos ah u yimaado ka Zaman Qarniyadii, oo halkan waxaad ka heli doontaa wax badan oo ka mid ah dhismayaasha qadiimiga ah iyo mesmerizing.
Waxaad awoodi kartaa qaadan geeyo doon iyada oo kanaalada dhalanteed magaalada iyo fiirsadaan in wax yaab leh oo dhan dhismayaasha caleenta-daboolay. Waa maxay more, sababtoo ah waa November, wax walba oo u muuqataa dreamlike dheeraad ah ay sabab u tahay dhammaan midabada dayrta qurux badan.
Waxaad ma aan tegi karo khalad ah adigoo booqanaya Bruges for Thanksgiving ah ee Europe. Waxaad xitaa karaa bood on tareen magaalada this si ay u sameeyaan waayo-aragnimo dheeraad ah oo dhan cajiib ah! and we are sure as soon as you complete your holiday, aad this wadaagi doonaa 5 Cities Best in Booqo for Thanksgiving in Europe post blog.
Rotterdam si Tareenadu Bruges
Utrecht in Tareenadu Bruges
Hague ayaa si Tareenadu Bruges
Norway waa ka fog ee waqooyiga qabow, laakiin Oslo waa nasiib ee qaybo ka mid ah koonfurta waddanka. Magaaladu waxay sidaas waa meel fiican ee kuwa jecel cimilada qabow laakiin weli ma qaadi karaan hargabka dhaxan ee Norway.
Oslo waa run ahaantii breathtaking in qayb ka this ee sanadka ay sabab u tahay oo dhan dhicitaan sixir muuqaal. Plus, aad hesho si aad u aragto Lights Northern kuwaas oo ugu wanaagsan arkay in dalka this, sidaas maxaa dheeraad ah oo qofku u baahan yaabaa?
Waxaad ma ka heli kara nooca dhaqanka Thanksgiving oo cunto aad loo isticmaalaa in lagu, laakiin waayo-aragnimo aad u hesho in ay ka badan tahay u qalantaa. Inkastoo menu ah ma aha sida kala duwan sida aad rabto lahaa, Norway weli wax badan oo ka mid ah cuntada oo xiiso leh in ay bixiyaan. Tusaale ahaan, ka dib waa qofood dhaqanka Norwegian. Si kastaba ha ahaatee, waxa la kariyay ee stock lo'da iyo duudduubay lefse, flatbread ka bur dhigay, baradho, iyo caano.
Laga soo bilaabo beeraha dadweynaha cajiib ah oo qalcadihiinna jir ah u Viking matxafyada, aad leedahay doonaa a badan inuu ku sameeyo Oslo. Waxaan hubnaa in aad rabto in aad doonaa in ka badan oo kaliya dhowr maalmood ku bixiya magaaladan weyn.
Oslo is our most north pick for 5 Cities Best in Booqo for Thanksgiving in Europe.
London, Boqortooyada Ingiriiska
Waxaad suurto gal ma boodi kartaa London. Qof kasta ayaa maqlay wax ku saabsan, iyo qof kasta wuu jecel yahay. Waa maxay xitaa ka fiican, waxaad u dhici doonaa jacayl la dayrta. Magaaladii waa weyn, laakiin waxaa jira in xilli waa waqti kaamil ah in ay soo booqdaan qaar ka mid ah sida caadiga ah u goobaha dadku ku badan.
Badan oo ka mid ah dhacdooyinka dhici wakhtigan ee sannadka, sidaa darteed haddii aad tahay taageere hawlo ah, oo aad jecelaato London. Intaa waxaa dheer, beeraha dayrta jira in ka badan yaab. Kensington Gardens, Greenwich Park, iyo Windsor Great Park qaar ka mid ah samada badan oo nooca aad rabto doonaa si ay u booqdaan.
Kuwa idinka mid ah oo ka fiirsan cunto u noqon qayb muhiim ah Thanksgiving, aad leedahay doonaa qaybtaada cadaalad in London. goobta cuntada halkan waa mid cajiib ah oo sida kala duwan sida mid dhabarka ku yaal magaalooyinka waaweyn ee gobolada. Waxaa jiri doona wax walba dhadhan.
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan u safrida London waa in ay jiraan khadadka badan tareen caanka in ka tago qaarada Europe inay London, sida kuwa ka Amsterdam, Paris, iyo Berlin, kuwaas oo dhammaantood bixiyaan waayo-aragnimo weyn oo ah meelaha baadiyaha iyo marayay ah Eurotunnel dureeri Channel Ingiriisi ama sida Faransiiska u wac - La Manche.
Waxaa hubaal ah inaad ogaato oo ku saabsan Switzerland, waana buuraha sixir, laakiin waxaad u badan tahay in aan maqlay oo ku saabsan Lugano. Waa magaalo qurux badan oo ku yaalla koonfurta ee Switzerland, meel u dhow xudduudda ay la wadaagaan Italy.
Magaaladii waa on xeebaha a mesmerizingly buluug gudubno hoose ee Alps, taas oo ku dhawaad ​​codadka sixir. Run ahaantii in oo keliya waa in ay ku filan si aad u hesho inaad ku bixisaan aad Thanksgiving in Europe midig waxaa, Lugano is our most unique pick in Best Cities to Visit for Thanksgiving.
Intaas waxaa sii dheer, safraya iyo magaaladanba via tareen ka waa waayo-aragnimo duwanyihiin on gaar ah. Taasi waa badan tahay sida ugu fiican ee ku raaxaystaan ​​quruxda mid ka mid ah gobolada ugu cajiibka ah ee Europe. Intaa waxaa dheer, aad ku raaxaysan doonaa safarka sababta oo ah tareenada fantastic isu, sida Swiss ah leedahay mid ka mid ah ugu tareenada tayada ee Europe.
Basel si ay Tareenadu Lugano
Bern si Tareenadu Lugano
Luzern in Tareenadu Lugano
Zurich si Tareenadu Lugano
Waxaan suurto gal ma awoodi karaan inay ka bood magaalada weligeed ah ee nalalka. Paris had iyo jeer waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo booqday ee dunida sabab ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu inta badan hab aad u dad badan taas oo ah sababta dabayaaqadii November waa markii ugu fiican in ay soo booqdaan. Plus, ma waxaad u xusuusan doonaa midabada dayrta spellbinding.
Waa maxay more, Paris ee November waa a Jannada loogu talagalay Instagramers. ma awoodi doontid inaad si ay u joojiyaan qaadashada sawiro inta aad halkan u joognaa. ugu yaraan, in la hubiyo in aad hesho safar oo aad weligaa ha sii xusuusan doonaa.
Sida cuntada, si fiican u, aad ogaato sida ay wax in France; oo waa ka gooni, Paris waa gastronomic caasimada dunida. Recreating Thanksgiving ah sidaas noqon doonaa mid aad u fudud, oo waxaad heli doontaa fursad in aad ku darto kacdo ah in ay. ma awoodi doontid inaad si ay u sameeyaan meel kale. Kaliya Paris siin karaan cuntada iyo meelaha in astonish doonaa xataa socotada pickiest.
Waxa kaliya ee wanaagsan kartaa quudhin waa in tareen iyo maraan baadiyaha Faransiis. Waxa ay noqon doontaa waayo-aragnimo ugu fiican!
Bixiya Thanksgiving Best ee Cities Best in Booqo for Thanksgiving in Europe
Waxaan tegi karin on iyo hadalka ku saabsan magaalooyinkaas. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sheegi karaan meelaha kale ee in sidoo kale u qalmaan aad bacdi agagaarka Thanksgiving. gobolka oo dhan Bavarian ah Germany, ah North of Italy iyadoo Milan gaar ahaan, Scotland, iyo wax ka badan. Thanksgiving in Europe noqon kartaa waayo aragnimo xusuus in mid ka mid ah meelahan.
Meel walba oo aad go'aansato in aad in dhamaadka tago, waa inaad ka fakartaa safraya tareen. Sida aan marar badan sheegay in, qaar ka mid ah meelahan aan idin siin doonaa waayo-aragnimo dhab ah oo dhammeystiran haddii aad iyaga soo booqan by rail. Jidka kaliya in aad awood u yeelan doonaan in ay la kulmaan sixir ee Europe si dhab ah. La xiriir Save A tareenka to get your tickets as soon as possible because Thanksgiving is almost here!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cities-visit-thanksgiving-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / in ay / de ama / fr iyo luuqado badan.
europetravel London longtrainjourneys Thanksgiving tareen safarka safarka tareenka travelbelgium travelfrance safar waddo travelswitzerland